Dhiragoni Chibereko Poda
Zvinoshungurudza Gourd Powder
Maitiro ekusiyanisa mhando yecollagen peptide poda
Patinokwegura, collagen inozopedzisira yarasika, izvo zvinoita kuti collagen peptides nemambure akasununguka anotsigira ganda kutyora, uye ganda reganda rinozove oxidize, atrophy, kudonha, uye kuoma, kuunyana uye kusununguka zvichaitika. Naizvozvo, kuwedzera collagen peptide inzira yakanaka yekurwisa kukwegura ...
Nei collagen peptide ichigona kuvandudza hutachiona hwevanhu?
Nekukurumidza kukurumidza kwesainzi yemazuva ano ekurapa, hutachiona uye chirwere zvinofanirwa kudzikira muzvinyorwa, asi mamiriro chaiwo ari mundima. Mumakore achangopfuura, mhando nyowani dzezvirwere dzakawanzoonekwa senge SARS, Ebola, iyo yagara ichikuvadza hutano hwevanhu. Parizvino, kune ...
Iko kushanda kwediki mamorekuru anoshanda peptide
ne admin pane 21-06-21
1. Nei peptide inogona kuvandudza ura hwehurongwa hwesisitimu uye yekumwa basa? Zvimwe zviitiko zvinoratidza kuti diki mamorekuru peptide inogona kuwedzera kukwirira kwematumbo villi uye kuwedzera iyo nzvimbo yekumwa yematumbo mucosa kusimudzira kukura kwetumatumbu madumbu uye ini ...
Huayan Collagen Hutano Kuchengeta Zvigadzirwa
ne admin pane 21-06-16
Musi waMay 29, 2021, Mr. Guo Hongxing, sachigaro weHainan Huayan Collagen Technology Co, Ltd., uye VaShi Shaobin, muvambi weGuangdong Beiying Fund Management Co, Ltd., vakaita musangano webhizinesi wekukurukura kubatana kwehutano. indasitiri kukudziridza pateni nyowani. Guangdong Beiying Fund Mamaneja ...
Nei uchiwedzera hove collagen peptides
ne admin pane 21-06-02
Kune makumi manomwe kubva muzana kusvika makumi masere kubva muzana yeganda revanhu rinoumbwa necollagen. Kana ikaverengerwa zvichienderana nehuremu hwepakati hwemukadzi wechikuru wemakumi mashanu nemashanu kg, iyo collagen mumuviri ingangoita 3 kg, inoenzana nehuremu hwemabhodhoro matanhatu ezvinwiwa. Uye zvakare, collagen zvakare iri dombo rekona ye ...
Mhedzisiro uye mashandiro eiyo walnut peptide
Uchishandisa zvipenyu zvakadzika-tembiricha yakaoma enzymatic hydrolysis uye imwe yakawanda-nhanho biotechnology kunyatso kugadzirisa walnuts inozivikanwa se "brain goridhe", bvisa yakawandisa mafuta mu walnuts, uye nekunyatso gadziridza zvinovaka muviri, ichiumba yakafuma mune gumi nematanhatu amino acids, mavitamini uye mamineral. ...
Diki mamorekuru peptide ndicho chakakosha chikafu chehutano muzana ramakumi maviri nemana
Peptides ndizvo zvakakosha zvinhu zvinoumbwa nemaseru ese mumuviri wemunhu. Izvo zvinoshanda zvemuviri wemunhu zviri muchimiro chemapeptides, ayo akakosha kutora chikamu kuti muviri upedze akasiyana akaomarara epanyama chiitiko. Peptides inowanzo kutaurwa muzana ramakumi maviri nemasere, akateedzana ...
Iyo yekuvandudza mhedzisiro ye peptide pane varume BPH
Vanhu vazhinji vanoshanda nguva yakawandisa, vanonoka kurara, vanonwa uye vanoshamwaridzana, uyezve kushaya kwekunakidzwa, pamwe nekugara kwenguva yakareba muhofisi, izvo zvinoita kuti BPH ive nehunhu hudiki. BPH yakajairika, unoziva here kuti inokonzera sei? Benign Prostatic Hyperplasia (apa mushure mekudanwa kunzi BPH) chirwere chakajairika ...
Iko kushanda uye kushandiswa kwehombe peptide
ne admin pane 21-05-08
Tora nyowani yemombe pfupa nekuchengeteka uye kusvibiswa kwakasununguka senge mbishi zvinhu, uye shandisa epamberi pancretin activation tekinoroji uye yakaderera-munyu kurapwa tekinoroji, hombe mamorekuru mapuroteni ari enzymatic hydrolyzed kupinda yakachena kuchena collagen peptide ine yakaderera mamorekuru uremu, soluble uye nyore kupinza ...
Iwe unoziva kukosha kwe diki mamorekuru anoshanda peptide?
Kutaura chokwadi, vanhu havagone kurarama kana vasina peptide. Matambudziko edu ese ane hutano anokonzerwa nekushayikwa kwepeptides. Nekudaro, nekukurumidza kukurumidza kwesainzi uye tekinoroji, vanhu vanoziva zvishoma nezvishoma nezve kukosha kwe peptide. Naizvozvo, Peptide inogona kuita kuti vanhu vave neutano hwakanaka, uye ...
Hukama huripo pakati pepeptide nekuzvidzivirira
Kushaikwa kwepeptide mumuviri kunokonzera hutachiona hwakadzika, uye nyore kutapukirwa, pamwe nekufa kukuru. Nekudaro, nekukurumidza kukurumidza kwemazuva ano immunology, vanhu vakazoziva zvishoma nezvishoma nezvehukama pakati pepeptide zvinovaka muviri uye hutachiona. Sekuziva kwedu, peptide kushaya zvinovaka muviri mu th ...
Nei isu tichida peptides nguva dzese?
Sechinhu chinoshanda chekuchengetedza hupenyu, peptides anotamba chikamu chakakosha mukuwedzera maseru ane zvinovaka muviri, saka zvakakosha kuti isu tipe peptide. Mutumbi pachawo unokwanisa kuburitsa mamwe anoshanda mapeptidi, zvisinei, mumazera akasiyana uye mune akasiyana mamiriro, kune akasiyana peptides ari sec ...